यौन सन्तुष्टिको हिसाबले मोटी कि पातली युवती ठिक ? जानी राखौ - Taja Report
Homeमनोरंजनयौन सन्तुष्टिको हिसाबले मोटी कि पातली युवती ठिक ? जानी राखौ
July 28, 2018 मनोरंजन Comments Off on यौन सन्तुष्टिको हिसाबले मोटी कि पातली युवती ठिक ? जानी राखौ
मानिसहरू धेरै भन्दा धेरै यौन सन्तुष्टि कसरी पाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चासो राख्ने गर्छन्। कतिले त यौन सन्तुष्टि पाउने नाममा लिंगको आकार बढाउनुपर्छ भन्ने ठान्छन्। सञ्चारमाध्यममा गरिने यौन स्वास्थ्यसम्बन्धी विज्ञापनको आधारमा लिंगको आकार बढाउन औषधि समेत प्रयोग गर्छन्।
यौन सन्तुष्टि लिंगको आकारभन्दा पुरुष महिलाबीचको प्रेममय क्रिडामा भर पर्छ। बजारमा लिंग बढाउने नाममा धेरै किसिमका साधन पाइन्छन्। तीमध्ये पम्पहरू बढी प्रचलित छन्। तर, पम्प प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्छ। नत्र यसले लिंगलाई चोट पुर्‍याउनसक्छ। लिंगको आकार ठूलो हुँदा महिलालाई समस्या हुन सक्छ। ठूलो लिंग योनीभित्र बलपूर्वक छिराउँदा योनीमा चोट पनि पुग्न सक्छ। लामो लिंग महिलाको योनीको भित्रसम्म पुग्ने र अझ बलपूर्वक सम्भोग गर्दा महिलालाई पीडा हुनुका साथै रक्तस्राव पनि हुन सक्छ।
लामो समय सम्भोग नगरेका महिलाहरु एकपटक सम्भोग गरिसकेपछि फेरि चाँडै चाहना राख्ने हुनु पनि यसैको कारण भएको बताइन्छ । एजेन्सी
समुन्द्रभित्र फोटो खिच्न जाँदा भेट्यिो यस्तो रहस्यमयी वस्तु, जसले मच्चायो विश्वभर हलचर
आमाले २ छोरा र १ छोरीलाई आँप खान जान भन्दै हात समाएर पानीमा डुबाइन्,बुझ्ननै गाह्रो [भिडियो हेर्नुहोस ]
कम्तीमा पचास जनालाई शेयर गरि आफु पनि स्वास्थ्य वनौ र अरूलाई पनि स्वास्थ्य बन्न प्रेरित गरौ,… (262)